Wafdi hordhac u ah Madaxweynaha Jubbaland oo soo gaaray Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi hordhac u ah Madaxweynaha Jubbaland oo soo gaaray Muqdisho
Ardaan Yare 9 March 2021
Diyaarad sida Ciidamada Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa Goor dhaweyd kasoo degtay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamada iyo xubno la socday ayaa hordhac u ah safar gelinkii dambe ee Maanta Magaalada Muqdisho uu ku imaan doono Madaxweyne Axmed Madoobe iyo wafdi uu hoggaaminayo oo kasoo ambabixi doona Magaalada Kismaayo.
Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweynaha Jubbaland iyo wafdigiisa la degin doon xeyndaabka Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo loo qorsheeyay inay degaan.
Shirka u dhaxeeya dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa la filayaa in todobaadkan uu ka dhaco Muqdisho, iyadoo shirkaas ay fududeynayaan Safaaradda Mareykanka iyo Xafiiska Qaramada Midoobay.
Shirkaan ayaa saddex jeer baaqay ayaa waxaa uu yahay mid lagu dhameystiri doono heshiiskii Guddiga Farsamada ku gaareen Magaalada Baydhabo, waxaana la filayaa in shirkaas uu noqdo mid guul kasoo dhammaada oo heshiis looga gaaro doorashada.
Beesha Caalamka ayaa horey Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqday inay heshiis gaaran, waxaana sida muutada shirkaan uu noqon doono mid heshiis looga khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada.
Safiirka cusub ee Somalia ee Masar oo warqadaha aqoonsiga laga guddoomay
Howlgal cir iyo dhul lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab oo la fuliyay